» यस्ता छन् मिस नेपाल २०१९ का उत्कृष्ट २६ प्रतिस्पर्धीहरु
यस्ता छन् मिस नेपाल २०१९ का उत्कृष्ट २६ प्रतिस्पर्धीहरु
चन्द्र घलान/हेटौँडा, २६ चैत । मिस नेपालको २५ औँ संस्करणमा यतिखेर नेपालका सुन्दरीहरु प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । वि.सं. २०५१ अर्थात सन् १९९४ बाट सुरु भएको यो प्रतियोगिता अहिले पनि जारी छ । सन् २००१ र २००६ मा भने मिस नेपाल प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको थिएन । गत मार्च २४ गते काठमाडौँमा भएको अडिसनबाट उत्कृष्ट २६ प्रतियोगीहरु छनौट भईसकेका छन् । २ सयभन्दा बढी आवेदकहरुबाट छनौट हुँदै उनीहरु उत्कृष्ट २६ मा पुगेका हुन् । उनीहरुले मार्च २७ तारिखमा ओरियन्टेसनमा पनि सहभागिता जनाईसकेका छन् । ८ फरक शहरहरुसहित काठमाडौँमा लिइएको अडिसनबाट उनीहरु छनौटमा पर्दै उत्कृष्ट २६ मा परेका हुन् । मिस नेपाल २०१९ मा चितवन, विराटनगर, विर्तामोड, भरतपुर र दमौलीबाट १–१ जना, पोखरा, भैरहवा र ललितपुरबाट २–२ जना, काठमाडौँबाट १२ जना र बाँकी ३ जना मध्ये १ जना अष्ट्रेलिया र २ जना संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आउट स्टेसन प्रतियोगीका रुपमा उत्कृष्ट २६ छनौट गरिएका छन् । यस भिडियोमा हामीले मिस नेपालका उत्कृष्ट २६ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरेका छौँ । हेरौँ भिडियो–
१) निशा पाठक–निशा पाठक, काठमाडौँबाट छनौट भएकी हुन् । २२ वर्षीया निशा ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२) एलिशा जोशी– पोखराकी एलिशा जोशी ५ फिट ५ ईन्चकी छिन् । उनी २३ वर्षकी छिन् ।
३) सोफिया भुजेल–काठमाडौँबाट छनौट भएकी सोफिया भुजेल ५ फिट ८ ईन्च उचाईकी छिन् । उनी २३ वर्षकी छिन् । उनले बैँग्लोरमा पार्ट टाईम मोडलिङ समेत गरेकी थिईन् ।
४) रिया बस्नेत– रिया बस्नेत काठमाडौँबाट छनौट भएकी हुन् । २२ वर्षीया रिया ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् ।
५) पुनम पन्त– तनहुँकी पुनम पन्त २४ वर्षकी छिन् । पुनम ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनी आर्मी नर्सका रुपमा समेत कार्यरत छिन् ।
६) अनुष्का श्रेष्ठ– काठमाडौँकी अनुष्का श्रेष्ठ २३ वर्षकी छिन् । अनुष्का ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
७) जेन्नी महर्जन– काठमाडौँकी जेन्नी महर्जन २४ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
८) अश्मिता महर्जन– ललितपुरकी अश्मिता महर्जन २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् ।
९) किरण थापा–काठमाडौकी किरण थापा २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१०) प्रदिप्ता अधिकारी– काठमाडौकी प्रदिप्ता अधिकारी २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् ।
११) निकिता कर्मचार्य– ललितपुरकी निकिता कर्मचार्य २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१२) रोज लामा– काठमाडौकी रोज लामा २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१३) सारा बजीमाया– पोखराकी सारा बजीमाया २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१४) लक्ष्मी राउत– लक्ष्मी राउत हात्तिवन ललितपुर निवासी हुन् । उनी बिजनेश स्टडीमा मास्टर्स अध्ययनरत छिन् ।
१५) रक्षा उप्रेती– काठमाडौकी रक्षा उप्रेती २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१६) मीरा कक्षपति– भक्तपुरकी मीरा कक्षपति २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ४ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१७) जेनिशा थपलिया– मोरङकी जेनिशा थपलिया २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१८) पुजा श्रेष्ठ– झापाकी पुजा श्रेष्ठ २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
१९) विपना सुवेदी– चितवनकी विपना सुवेदी २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२०) सुवेक्षा अधिकारी– ललितपुरकी सुवेक्षा अधिकारी २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२१) प्रकृति कट्वाल– झापाकी प्रकृति कट्वाल २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२२) न्यान्सी बोगटी– चितवनबाट छनौटमा परेकी अर्की प्रतिस्पर्धी हुन् न्यान्सी बोगटी । उनी २४ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२३) शिवानी घिमिरे– भैरहवाकी शिवानी घिमिरे २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२४) सान्त्वना मालाकार– काठमाडौकी सान्त्वना मालाकार २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२५) प्रथा अधिकारी– काठमाडौकी प्रथा अधिकारी २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ९ ईन्च उचाईकी छिन् ।
२६) संस्कृति घिमिरे– भैरहवाबाट छनौट भएकी अर्की प्रतियोगी हुन् सँस्कृति घिमिरे । उनी २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर साईन्समा ग्राजुएसन गरेकी उनी सफ्टवयर इन्जीनियर र बिजनेस एनालिष्टका रुपमा कार्यरत छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । उत्कृष्ट २६ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।